”Muddo kororsi ma ogolin!” – Maraykanka oo si rasmi uga digey in la fashiliyo Shirka Dhuusameeb 3 | Hadalsame Media
TOOS u daawo: Lincoln City vs Liverpool, Man City vs Bournemouth,…
TOOS u daawo: Bayern Munchen vs Sevilla, AC Milan vs Bodo…
Israel oo waloow ay Imaaraadka la ”heshiisey” misna Maraykanka ku dirtay…
Iiraan oo si rasmi ah u shaacisay inay Xuutiyiinta u gudbisey…
Doollarka oo la sheegay inay dunida is macasalaamayn karaan sanadka soo…
Home Arrimaha Caalamka ”Muddo kororsi ma ogolin!” – Maraykanka oo si rasmi uga digey in...
”Muddo kororsi ma ogolin!” – Maraykanka oo si rasmi uga digey in la fashiliyo Shirka Dhuusameeb 3
(Muqdisho) 13 Agoosto 20202 – Xilli ay maalin uun ka harsan tahay isla markaana aanay muuqan saan saan ku saabsan inuu sidiisaba qabsoomayo ayaa waxaa war soo saartay Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho.
Maraykanka ayaa muujiyey sida ay asaasi u tahay in xal loo dhan yahay laga gaaro arrimaha murugsan ee ku hareereeysan Doorashada 2021-ka.
”Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho waxay dhararaysaa natiijada shirka Dhuusamareeb 3. Baahida loo qabo xeer jajab dhab ah iyo wada tashi sal ballaaran waa muhim,” ayaa uu u dhigan yahay war rasmi ah oo kasoo baxay Maraykanka.
”Nooca doorasho ee la qaadanayaa waxay u baahan tahay taageerada DF Somalia, Maamullada, Baarlamanka iyo saamileeyda kale. Waa in doorashadu waqtigeeda ku dhacdaa oo aan waxba lagu darin.” ayaa la daba dhigay.
Guulaysiga shirka oo rajo badan laga muujiyey markii ay DF Somalia ka qayb gashay shirkii Dhuusamareeb 2, ayay wax kasta is bedeleen markii si deg deg ah loo tuuray RW hore.
Previous articleIsraa’iil & dadka dhexe ee Xisbiga Dimoqraadiga oo ku DADAALAYEY inaysan soo laaban Ilhaan Cumar (Ogoow sababta)
Next article”Kulligiin waxaad agteenna ka tihiin MIDGO!” – Sheeko cibro ah arday Soomaali ah ku qabsatay Jarmalka
TOOS u daawo: Lincoln City vs Liverpool, Man City vs Bournemouth, Skendija vs Tottenham – LIVE (Shaxda Sugan)
TOOS u daawo: Bayern Munchen vs Sevilla, AC Milan vs Bodo Glimt – LIVE (Shaxda Sugan)
(Washington, DC) 24 Sebt 2020 - Danjiraa Maraykanka ee Israel, David Friedman, ayaa xaqiijiyey in Imaaraadka oo dhowaan heshiis la galay Israel aanay heli...
Iiraan oo si rasmi ah u shaacisay inay Xuutiyiinta u gudbisey tiknolojiyadda samaynta gantaalaha & daroonnada + Sawirro
Doollarka oo la sheegay inay dunida is macasalaamayn karaan sanadka soo aaddan ee 2021-ka
Team News 📝 Let's do this, Imps 🔴⚪️ pic.twitter.com/21B9ynixNl — Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) September 24, 2020 https://platform.twitter.com/widgets.js Lincoln City vs Liverpool Lincoln City vs Liverpool 📋 TEAM NEWS 📋 Here's...